သမ္မတ Emmanuel Macron ၏မိန့်ခွန်းနှင့်အဘယ်သို့ပြောင်းလဲမည်ကိုမှတ်သားရန်အချက်အလက်များမှာဤတွင်ပါ
By နေပြည်တော် On အောက်တိုဘာ 28, 2020
"The Mboa Manager" သည်နိုင်ငံရေးဘဝကိုပျက်ပြားစေသောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခု ...
ဘယ်လ်ဂျီယံ - ဘယ်လ်ဂျီယံစမ်းသပ်မှုနည်းဗျူဟာကိုပြောင်းလဲနေသည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Emmanuel Macron သည် ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ၈ နာရီတွင်တိုက်ရိုက်စကားပြောဆိုလိမ့်မည်။
ကျန်းမာရေးအခြေအနေသည်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပိုဆိုးလာသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသတင်းများကိုဆွေးနွေးရန်Octoberlyséeတွင်အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်အင်္ဂါနေ့တွင်ကာကွယ်ရေးကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းထားသည် အရပျ၌ထားခံရဖို့ကန့်သတ်။ အထူးသဖြင့် Marine Le Pen ကဝေဖန်ပြောဆိုသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကပ်ရောဂါစတင်စကတည်းကငါ့ကိုစိတ်ထိခိုက်စေသည့်အရာမှာလုံးဝမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုပထမလှိုင်းအတွက်ခွင့်လွှတ်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမေ့လို့မရနိုင်တဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကိုတွေ့ရတယ်။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးလွဲချော်သည့်အခါကန့်သတ်"
ထိုအခါပြင်သစ်စိုးရိမ်ကြသည်။ သူသည် Emmanuel Macron ၏မိန့်ခွန်းကိုသူကြောက်သည်၊ အကြောင်းမှာအစိုးရ၏အကြီးအကဲသည်ပြင်သစ်နှင့်နောက်ဆုံးစကားပြောသောနောက်ဆုံးသတိပေးချက်အနေဖြင့်ချုပ်နှောင်ခြင်းကိုကြေငြာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သောအစီအမံများကဘာတွေလဲ ပြည်နယ်၏ ဦး ခေါင်း ? အသစ်တစ်ခုကိုခံထားရသောမျှော်လင့်ထားပါသလား?
အိမ်ပြန်ချိန်သတ်မှတ်ချက် - ချုပ်နှောင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုရှောင်ရှားရန်အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုလား။
ဒါကမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအတာ, မီဒီယာကရက်အနည်းငယ်လောက်ပြောနေတာတစ်ခုပဲ။ အကယ်၍ သော့ပိတ်ထားမယ့်အစားညမထွက်ရအမိန့်ကိုနေရာချလိုက်ရင်ကော။ သတိပေးချက်အနေနှင့်၊ ပြင်သစ်ရှိမြို့ကြီးများစွာတွင် \_ t စားသောက်ဆိုင်များသည်ဖောက်သည်များအားလက်ခံနိုင်သော်လည်းတိကျ။ တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများကိုလေးစားလိုက်နာလျှင်အရက်ဆိုင်များသည် (၁၀ နာရီ) အပြီးအပိုင် (သို့မဟုတ်) အစောပိုင်းကသူတို့၏တံခါးများကိုပိတ်ခဲ့ရသည်။ ညမထွက်ရအမိန့်ကနေ့အလင်းရောင်ကိုမြင်တွေ့ရလျှင်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များသည်အလွန်အကူအညီမဲ့နေပြီးပြင်သစ်လူမျိုးများအားညအချိန်တွင်အိမ်ပြန်ရောက်စေ။ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။
အကယ်၍ အီမန်နူရယ်လ်မက်ကွန်းသည်ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာကိုကြေငြာလိမ့်မည်ဟုတာဝန်ရှိသူမှမည်သည့်အရာကမျှဖော်ပြခြင်းမရှိပါက၎င်းသည်အလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ဒါကြောင့်ပြင်သစ်အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာရှောင်ရှားလိုသောအသစ်သောခံထားထက်အများကြီးလျော့နည်းတင်းကျပ်အစီအမံပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ပြန်လည်စီစဉ်။ ရသောအရာဖြစ်နိုင်ပါသလော။
အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအမျိုးမျိုးကမီဒီယာတွင်ပြောကြသည်။ မဟုတ်ပါ၊ အစိုးရက၎င်းအားပြန်လည်ချုပ်နှောင်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုခြင်းမရှိပါ ပြင်သစ်လူ ဦး ရေ။ ၎င်းသည်အပြီးသတ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ရန်လိုသည်၊ " ဒေသခံဖြစ်စေ၊ အမျိုးသားဖြစ်စေဖြစ်စေနောက်ဆုံးအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်" ဒါပေမယ့်အစိုးရကအဲဒါကိုသိတယ်၊ ငြင်းလည်းမထားဘူး၊ နံပါတ်များကိုကပ်ဘေးဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်" ဤအကြောင်းကြောင့်ဒေသန္တရအချုပ်အနှောင်ခံထားရသောအယူအဆကိုမီဒီယာအများအပြားတွင်အထူးသဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ပဲရစ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမျှဝေခဲ့သည်။
နိုင်ငံသားများသည်ရှင်းလင်းသောမိန့်ခွန်းကိုမျှော်လင့်ပြီး Emmanuel Macron သည်စိတ်ဓာတ်ရေးရာသင်ခန်းစာများကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။ coronavirus နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်မြူထူထပ်စွာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီးအစိုးရ၏တာ ၀ န်မှာနိုင်ငံတော်၏အကြီးအကဲများမှရှင်းပြရန်လိုအပ်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းလည်းပေါ်ပေါက်လာသည် - ကုမ္ပဏီများစွာက၎င်းကိုဆွဲဆောင်ထားသည် သွား သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများ၏ပြင်းထန်မှုမှာနဂိုအတိုင်းရှိနေသည်ကိုသဘောပေါက်။ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Emmanuel Macron အနေဖြင့်စီးပွားရေးခရီးသွားများအားတတ်နိုင်သမျှကန့်သတ်ရန်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုကိုတွန်းအားပေးရန်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။။ ထို့ကြောင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်လူ ဦး ရေနည်းပါးပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကိုယုတ္တိနည်းစွာကူးစက်နိုင်သည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားသင်ခန်းစာတွေရှိရမယ်၊ အထူးသဖြင့်ကျောင်းသားများအတွက် (စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များကိုဖျက်သိမ်းပြီးသည်)။ သို့သော်အစိုးရသည်ပြင်သစ်တို့၏ပုဂ္ဂလိကဘဝကိုထိန်းချုပ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့အင်အားချိနဲ့နေနိုင်သည်။ သမ္မတ၏အကြံပေးတစ် ဦး က ၀ န်ခံခဲ့သည်။ မင်းဘာမှမတားနိုင်ဘူး မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း မှလွဲ၍ ပြင်သစ်တံခါး၏တံခါးခုံ၌နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုရပ်သည်။ ညမထွက်ရအမိန့်မရှိလျှင်၊ ဘယ်သူမှဒီကိုမလာချင်ကြဘူး"
သမ္မတနိုင်ငံမှပေးမည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်စစ်မှန်သောသတင်းအချက်အလက်မှမဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ။ နိုင်ငံသားများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ဒီ socket မိန့်ခွန်းစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်ဆိုင်းမည်သည့်ကိစ္စတွင်ဖြစ်ပါတယ် အတိုက်အခံများကအလွန်အမင်းမှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းသည်အစိုးရများနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်သို့မဟုတ်ပြုလုပ်မည့်ရွေးချယ်မှုများကိုအစိုးရအားဝေဖန်ရန်ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်မကြုံစဖူးကပ်ရောဂါကိုအသုံးပြုရန်မတွန့်ဆုတ်ပါ။.
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.breakingnews.fr တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်ခဲ့သည်
နေပြည်တော် 1669 ရေးသားချက်များ0မှတ်ချက်များ
ရာသီဥတုကိုတင်ပြသူ lyvelyne Dhéliatသည်ယခုအချိန်တွင်သေခြင်းကိုတိုက်ဖျက်နေသည်
ဤတွင် Emmanuel နှင့် Brigitte Macron တို့၏ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ စာရင်းစစ်တရားရုံး၏ထင်မြင်ချက်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်
“ The Mboa Manager” သည်အာဖရိကနိုင်ငံရေးဘ ၀ တွင်လူငယ်များကိုဟန်ချက်ညီစေသည့်ဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံ - ဘယ်လ်ဂျီယံဟာသူ့ရဲ့စမ်းသပ်မှုနည်းဗျူဟာကိုပြောင်းလဲနေပြီ။
အိန္ဒိယ - မီးရထားများသည်ကုန်ပစ္စည်းရထားများတွင်အစောင့်ဗင်အစားထိုးရန်နည်းပညာဖြေရှင်းနည်းကိုအသုံးပြုသည် အိန္ဒိယ ...